Astaamaha Isbeddelka! | Doodwadaag waa Danwadaag.
Isbeddeldoonka Soomaalida waa amuuro badanyahay, qaar baa u qaatay isbeddelka madaxda siyaasadda, kuwa ayaa u fahmay diinta oo laad lagu kiciyo oo gaalnimo ku dhawaaqay. Koox ayaa sheegatay Cilmaaniyad aysan lahayn taariikhdeeda ayna qaadi karin culayskeeda.
Inkasta oo dhamaan muuqaalada kore ay soo galayaan micnaha guud ee isbeddel, balse isbeddelka uu Dhaqdhaqaaqa Isbeddeldoonka Soomaaliyeed (DHIS) umadda ugu yeerayo intaas oo dhan waa ka geddisan yahay. Waa isbeddel dhumuc leh oo ku dhaca qaab fakir umadda:-
1-Isbeddel guud oo ku yimaado qaad fakirka umadda.
2-Isbeddal ku dhaco aragtida aanu ka haaysanno umadnimada.
3-Isbeddel bisayl waxa ay siyaasad tahay, inta aan siyaasiga loo gudbin.
4-Isbeddel ku aaddan qaab fahanka diinta inta aan gaalnimo loo alalaasin.
5-Isbeddel akhlaaqda iyo anshaxa umadda, inta aan loo bayrin doodaha Galbeed iyo Bari.
Dhaqdhaqaaqa Isbeddeldoonka Soomaaliyeed (DHIS).